प्रहरीलाई पहरेदार बनाउदा चोरी भयो बलुवा ! « News24 : Premium News Channel
प्रहरीलाई पहरेदार बनाउदा चोरी भयो बलुवा !
कपिलवस्तु । कपिलवस्तुको वाडगंगा नदी किनारको नदीजन्य वस्तु तस्करीमा प्रशासन र प्रहरी नै एक अर्कालाई दोष लगाएका छन् । इलाका प्रशाशन कार्यालय जीतपुरका प्रमुख विक्रम शर्मा सहित स्थानीय तथा पत्रकारका टोलीले बुधबार कपिलबस्तुको वाणगंगा ७ बनगाई क्षेत्रको वाणगंगा नदी किनारमा अबैध रुपमा डम्पिङ गरिएको १ सय बढी ट्रली वालुवा फेला पारेका थिए । ठूलो परिमाणमा रहेको बालुवा सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि तत्कालै प्रहरी र वडा अध्यक्ष लाई जानकारी गराएका थिए ।
तर अर्को दिन स्थानीय तथा पत्रकारको टोली बालुवा डम्पीङ गरिएको क्षेत्रमा पुग्दा आधा पनि बालुवा बाँकी थिएन । यो बिषयमा इलाका प्रसासन कार्यालय जितपुरका प्रमुख विक्रम शर्मासँग बुझ्दा आँफुले तत्कालै व्यवस्थापन गर्न नसकिएकाले प्रहरीलाई सुरक्षा निगरानी गर्न अनुरोध गरेको दाबी गरे ।
तर उक्त क्षेत्र हेर्ने इलाका प्रहरी कार्यालय पिपराका प्रहरी निरीक्षक चन्द्र बहादुर के.सीले डम्पीङ गरिएको बालुवाको सुरक्षाको लागि आँफुलाई कतैबाट जानकारी नआएको भन्दै पन्छिए । डम्पीङ गरिएको बालुवाको बिषयमा वाणगंगा ७ का वडा अध्यक्ष बिष्णु गिरीलाई समेत जानकारी थियो ।
नदीबाट अवैध उत्खनन गरी थुपारीएको बालुवा प्रहरी, प्रशासन र जनप्रतिनिधिका आँखै अघि गाएब भएपछि नदी दोहनमा प्रहरी प्रशासन र जनप्रतिनिधिकै मिलेमतो रहेको आशंका गरिएको छ । यसरी तस्करी भएको बालुवा विनाबिल रसिद ३ हजार देखि ५ हजार प्रति टिप विक्री हुने गरको छ ।